यस्तो छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा जाने जम्बो टोली
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमण गर्ने ‘डेलिगेसन’ टोली ४२ देखि ५० जनासम्मको हुने भएको छ ।
टोलीमा प्रधानमन्त्रीबाहेक तीन जना मन्त्री, नौ जना सांसद, मुख्यसचिव, परराष्ट्र सचिव, सचिव, मिडियाका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी, उद्योगी व्यवसायीलगायत गरेर ५० जनासम्मको हुने भएको हो । यो टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार पनि हुनेछन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा बढीमा २५ जना हुने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै बनाएको निर्देशिकामा आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै उच्च स्तरीय भ्रमण टोली बढीमा २५ जनासम्मको हुने व्यवस्था गरिएको हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको भ्रमणमा निर्देशिका विपरीत भ्रमण टोलीको सङ्ख्या बढाउन लागिएको बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टोलीमा पर्न धेरैले चाहाना राख्ने भएकाले सङ्ख्या बढ्न पुगेको हो । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने उक्त टोलीमा बढीमा ४२ जनाको नाम मात्रै प्रस्ताव गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव गरेका नाम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि भ्रमण टोलीको टुङ्गो लाग्ने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नाममाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संशोधन गरेर घटाउन या बढाउन सक्ने भएकाले प्रस्तावित नामहरूमा केही थपेर ५० जनासम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका नाम
प्रधानमन्त्री केपी ओली, भौतिक योजना तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग मन्त्री मात्रिका यादव छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा नौ जना सांसद परेका छन् । सांसदहरू शरदसिंह भण्डारी, गणेशसिंह ठगुन्ना, रामवीर मानन्धर, रामेश्वर यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सीताराम महतो, उमा रेग्मी, दिनानाथ शर्मा र शान्ता चौधरी रहेका छन् । त्यस्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र परराष्ट्र मन्त्रालयकै चिफ अफ प्रोटोकल दीपक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा भारत जाने छन् ।
त्यस्तै, सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, डा. राजन भट्टराई, प्रेश सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल पनि भ्रमण टोलीमा परेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको टोलीम नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहित नौ जना व्यापारी पनि प्रमको भ्रमण टोलीमा परेका छन् ।
चेम्बरबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, इच्छाराज तामाङ तथा व्यापारीहरू नरेश श्रेष्ठ, भाष्करराज कर्णिकार, निरज राई, भिमलाल पौडेल, डा. अन्जान शाक्य र उर्मिला श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसबाहेक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको टोली पनि सहभागी हुनेछ ।
यसपटक कलाकार पनि भ्रमण टोलीमा समावेश
यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोप भ्रमण टोलीमा नेपाली कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने जनाएका छन्। यससंगै महानायक राजेश हमालको नाम पनि भारत भ्रमण जाने टोलीमा समावेश हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय नायक राजेश हमाल पनि ओलीको राष्ट्रियताका मुद्धाप्रतिको अडान र राष्ट्रवादी छवीका कारण नाजिएका हुन्।
ओलीले नेपालमा भारतीय फिल्म छायांकनको लागि उत्प्रेरित गरेर नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र विकाश गर्ने लक्ष्यका साथ भारतीय वरिष्ठ कलाकारहरुसंग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोहि कार्यक्रममा नेपाली कलाकार र भारतीय वरिष्ठ कलाकारहरुबीच पनि छलफल हुने छ। जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमा समेत कसरी भारतसँग मलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ
भारत भ्रमणमा जाने टोलीमा महानायक राजेश हमालको नाम चर्चामा आए पनि अन्य कलाकारको भने नामावली अझै सार्वजनिक भएको छैन।
प्रकाशित : बुधबार, चैत २१, २०७४१३:३९
सरकारले निर्धक्कसँग ढुक्क भएर देशमा विकासको मूल फुटाउछ – प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के के छन् कार्यसूचि ?
सिनियर भारतीय कम्युनिष्ट नेता सीताराम यचुरी काठमाडौँ आइपुगे !